Insephe "Okulandelayo": ukubuyekezwa. Insephe "Okulandelayo": izici, izithombe
emakethe Russian nomkhiqizo van Insephe "Okulandelayo" sekuyinkinga umcimbi mlando Gorky Automobile Plant. Okunjalo nezimoto bezentengiselwano at Gaz ekhiqizwa isikhathi eside - kusukela ngo-1994, wahamba emgqeni inhlangano ekuseni amaloli, bese ezimotweni nezinye ukulungiswa yalo. Namuhla, Gaz wayezimisele wokukhipha kusukela ezimakethe izimbangi zayo main - "Ford Transit", "Mercedes umsubathi" nezinye malotonnazhki. Kodwa ingabe le Insephe entsha "Okulandelayo" ufanelwe isihloko engcono imoto commercial? Ukuze siphendule lo mbuzo namuhla, thina uyoyinikela ukubuyekeza ahlukene lokhu iloli.
Ukubukeka kwangaphandle imoto iye ngokuyinhloko elibuyekeziwe - ukufakazela ukuthi isimo esisha ngokuphelele emzimbeni, izibani kanye bumper (bheka isithombe.). Insephe "Okulandelayo" yayakhiwe ekubeni inkundla Ukubuyela "Ebhizinisini" eyandulela ngoba onjiniyela iye yathatha le imodeli, zonke izimfanelo ezinhle futhi ziphile. Ikakhulukazi, kumayelana wezangaphakathi, kodwa ngakho kamuva.
Design Insephe van, "Okulandelayo" (izibuyekezo futhi phawula leli phuzu) has a izici kunalokho obufanayo uchungechunge ngamaveni, sigibele Ukubuyela "Ebhizinisini", okuyinto zavezwa ngesikhathi Gorky isitshalo kusukela ngo-2010. Empeleni, umshini omusha ine konke okufanayo abanikeze asebenza nabo design. Nokho, manje, kusobala ukuthi kukhona ebonakalayo, entsha, impumuzo imigqa, Izinsimbi enhle, somoya esikhulu bumper omkhulu, kufanelana kahle ku ukubukeka jikelele we umshini. umklamo wawushiywe yisikhathi we "Okulandelayo" lakhe lingeke ladalulwa - kanti lokho okuyiqiniso. Kubonakala sengathi uhlelo Nizhny Novgorod ekukhiqizweni isikali omkhulu kakhulu.
Uma kuhlelelwa wezangaphakathi cishe into engenakwenzeka ezibhekene onjiniyela - elingaphakathi entsha kumele kungabi amaphutha onobuhle odlule. Ngakho, ngaphakathi izinsephe entsha kwakucatshangwa ngobala ngakunye. Kodwa njengoba livela phezu Ergonomics, isikhathi uzokutshela, kodwa okwamanje ake uhambe ezinemininingwane ngokusebenzisa gumbi.
Ake uqale nge umnyango. Sheathing ukhumbuza basitshela ngokucacile lowo owayephatha efakwe Insephe Ukubuyela "Ebhizinisini" eminyakeni embalwa edlule. Nokho, wabe waba design ukuhluka. Mirrors - lena cishe inkinga ecasulayo kakhulu yikho konke izinsephe: ngenxa yobukhulu bawo amancane ukuthatha reverse kwadingeka cishe zifa. Kodwa manje anda surface area kakhulu, okusho ukuthi umshayeli kuyoba kuhle ukuthi aqaphe isimo endleleni, hhayi kuphela e-phambili ezinhlangothini (endleleni, nale e izinkinga Gorky malotonnazhek asikaze), kodwa futhi at the ezingemuva.
Old - esikhathini esidlule!
Aseqediwe njengoba sivala futhi umnyango izibambo, ezingasetshenziswa manje livulwe singenzi lutho olwengeziwe. Abaklami baye zinakekelwe futhi boarding ukhululekile / ngehle esitimeleni umshayeli, kancane okwandisa nasekhothameni nezinyathelo eside. Ngaphakathi, kwakukhona iqoqo wokukha igilavu linezingxenye, emaphakathi omunye okuyinto iwuMnyuziyamu imibhalo A4 (khumbula onobuhle ekuseni izinsephe abashayeli kwakudingeka agobe iphepha ngesigamu, uma sikubeka ibhokisi igilavu). Console isikhungo ngempela ergonomic - akukho ukukhubazeka kungukuthi uyalandelwa. Amajaji sensimbi sinephutha ulungisa backlight ngesikhathi esifanayo ilula futhi ulwazi.
Amandla ulungise esihlalweni somshayeli bacondze etindzaweni letehlukene - omunye izici eziyinhloko entsha imoto "Gazel-Okulandelayo". Izibuyekezo wabanikazi onobuhle ngaphambili Gorky malotonnazhek bavame ukucindezeleka ukungabi nakwenzeka kwento ukulungiswa kwesihlalo ukuphendukela kunoma iluphi uhlangothi njengoba ethile enkulu ngokuya induduzo. Manje lokhu inkinga isixazululekile ngokugcwele. Ngaphezu kwalokho, gumbi likhona ngisho ube usufaka iarmrest phakathi umshayeli nomgibeli esihlalweni.
Hard futhi njalo Imoto yayisikhahlameza plastic - kuyisici sobuntu zonke wezimpahla nensephe yakhiqizwa kusukela ngo-1994 kuya 2012. Futhi ekugcineni, cishe khona iminyaka engu-20 ye-model, onjiniyela wanquma ukuthatha lolu daba. Manje sikhuluma umsindo ukwahlukanisa ehluke ngokuphelele, okuyinto efakwe Insephe "Okulandelayo" entsha. Izibuyekezo Ochwepheshe bathi sibonga ekuxazululeni impikiswano yasekhaya iloli soundproofed ungakwazi ngempela ukuncintisana ezimakethe zomhlaba.
Isibuyekezo sokugcina abathintekayo ohlelweni ukupholisa. Nokho Ilokhu bephonsa lumangaza plastic esikhathini esidlule, njengoba izinkinga ngokumiswa nokusebenza kohlelo bafudumale.
onobuhle Early izinsephe ifakwe izici zokuphepha yekwentiwa. Phakathi kwabo kwakukhona kuphela 3-iphuzu amabhande, le umhlali 2 lasetshenziswa a pretensioner owodwa nje onjalo. Manje Gaz nganquma ukukhuluma inkinga kusukela iphuzu lubucayi kakhudlwana umbono. Ngaphezu amabhande entsha Ushintshe, imoto ifakwe airbag amabili ngaphambili. Esikhathini esizayo, onjiniyela ukuhlela ukuhlomisa umshini nezinye izinketho.
Njengoba yaziwa, ikhwalithi womshini kumakhabheni phezu Insephe kuqala futhi izizukulwane yesibili kwaba ngempela abanelisi. Abanikazi tonnage amagesi iminyaka 1994-2003 yokukhululwa ngokuvamile wakhononda metal abolile e footrests futhi phansi emnyango. Kwakukhona ngisho izimo ukuthi metal umane eyayina futhi ebhidlikayo ngenxa ukugqwala. Siqaphele iminonjana nokugqwala futhi nemengamo isondo.
Kodwa lapho kukhululwa isizukulwane sesibili izinsephe namaqhinga namanje waqhubeka, futhi degree entsha. Kusukela 2003, esikhundleni imibundu izimoto abolile hood - ke kwakudingeka bahlale tint, futhi ngezinye izikhathi ukufaka entsha. Ezinye ababazi wathola indlela ngaphezulu yasekuqaleni - anamatheliswe kwi upende (ngokunembile ngaso izinsalela zayo) ifilimu carboxylic umbala omnyama.
Ngaphezu kwalokho, izinsephe entsha abolile umzimba, futhi kakhulu ngokuvamile kusetshenziswa. Ezinhlangothini imoto emva 3-4 kweminyaka wokusebenza asanda sigcwele izimbobo, nensimbi, njengoba esikhathini esidlule, kwadingeka impahla khumuza futhi fall out nge izimbobo efanayo Yiqiniso. Kodwa ngeke esimeni esinjalo iloli elisha "iNsephe-Okulandelayo"? Izibuyekezo Isazi abonisa ukuthi kukhona. Futhi kukhona amaqiniso ezomile. Okokuqala, umzimba "Okulandelayo" imoto eyenziwe aluminium (ie, ukugqwala ngeke uthathe nhlobo), kanye gumbi - ezenziwe ngensimbi lashukumisa (noma kunalokho, embozwe ungqimba yalo). Ngokuvamile, metal abolile ezindaweni inkinga ziyolibaleka.
Insephe "Okulandelayo": injini izici
Nge ifa Uhlaka "Okulandelayo" wathatha phezu Ukubuyela "Ebhizinisini" futhi powertrain line, eyayinqamula, njengoba sazi, uye wanda kakhulu ngo-2010 (ngaleso sikhathi kwakukhona udizili "Cummins" emqulwini 2.8 amalitha). Kuyinto kubo futhi uzobe inikwa amandla yi-imoto yonke iminyaka ezalandela izinto zokukhiqiza kuphela. Iphuma ne turbo iyunithi gearbox manual 5 izinyathelo. Njengoba for petrol , "Gazel-Okulandelayo" abanikazi imoto Izibuyekezo uqaphele kahle eliphezulu motor. Ngu idatha iphasipoti, echitha akukho kuka 8.5 (60 km / h) futhi 10.3 (at 80 km / h) ilitha diesel at amakhilomitha angu-100. I isivinini imoto ka 134 amakhilomitha ngehora.
Kuwufanele egcizelela ukuba nokwethenjelwa olukhethekile injini diesel, okuyinto efakwe Insephe "Okulandelayo" entsha. isisetshenziswa kwayo ngokuphelele (ie run ngaphambi kulungiswe) kuyibanga elingaphezulu kwamakhilomitha angu-500 eziyinkulungwane. Ngakho, laba abangu-120-eqinile American "Cummins" kuyamfanela isihloko "abayizigidi ezingu-injini." Ukuze uqhathanise, 402 th futhi 406 th isisetshenziswa motors abanalo ezingaphezu kuka 200-300 eziyinkulungwane km ukulungisa.
Nge ukufakwa entsha amandla iyunithi kanye nenombolo uthuthukiswe eziningi kule lobuchwepheshe nsimu, interservice imoto mileage iye sisuka ku-15 kuya kwezingu-20 amakhilomitha. Same inkonzo ngezikhawu kuyoba nezinye ukushintshwa "Gazel-Okulandelayo" imoto - ibhasi, iloli noma nezinye Izinguquko yalo.
ukunakwa okuningi ikhokhelwa abashayeli kwekhabhoni ezinobuthi of qeda amagesi. Manje Gaz iloli "Cummins" yakhe kuyoba akabangeli nje kuphela Euro-4 ejwayelekile, kodwa futhi Euro-5 kanye Euro-6 ngisho (ukuguqulwa Insephe "Okulandelayo" ibhasi kanye). Nokho, lokhu nokunakekela imvelo kuye kwashukumisela izinkinga ezintsha kanye nobunzima yesondlo. Manje abaningi balabo abathenge Insephe "Okulandelayo" ( "umlimi" noma van - akunandaba), esekhala izinkinga ngezihlungi Imibhobho esemzimbeni, okuyizinto komyanga izinga diesel avimbekile cishe nyanga zonke. Lokho for ukusebenza evamile traffic yasekhaya udinga ukuthenga imoto namazinga okungenani kwemvelo (kulesi simo Euro-4) futhi ukuthola inethiwekhi amagalaji athengisa okusezingeni eliphezulu ngempela izinga nophethiloli.
Umthamo wezimpahla gumbi
Ukuvela zokuguqulwa entsha ukuze umzimba side, "Okulandelayo" elingangena ngokuphepha imithwalo esinevolumu ezifana 11, 16, 18 futhi cubic ngaphezulu kwamamitha. By the way, imitha-4 version yokuhlala ncamashi 6 Pallets. Nokho, abashayeli abaningi namanje abaqondi indlela ukukhululwa enjalo eside wheelbase izinguqulo. Ngempela, kungani usike uzimele ngesigamu, bese ufaka phakathi ezimbili neengcezu of the siteshi? Hhayi kulula ukudala i Uhlaka ebalulekile njengoba sinjalo, isibonelo, amaJalimane ukwenzani zabo "Atego"? Kubonakala sengathi i-esikhashana umshini isandiso indlela izoba Gaz umkhuba eside.
Insephe "Okulandelayo": intengo
Izindleko sokuqala imoto ngo-2014 kuyinto ruble ayizigidi 725. Ngenxa yalesi intengo umthengi omenyiwe "angenalutho" chassis. Side Insephe "Okulandelayo" (futhi ngaphandle komzimba) izobiza ruble 745.000. On-ibhodi inguqulo, kuye ngobude ifreyimu aphakathi kuka 750 no 764 ayizinkulungwane. Insephe "Okulandelayo" umlimi nge gumbi kabili double angathengwa umthengisi ogunyaziwe ngentengo ruble 820 000. Manufactured ezimotweni izimpahla abiza mayelana esifanayo - ukusuka 788 000 ukuba 820 000 ruble. Intengo Insephe "Okulandelayo" (ibhasi) kuyinto ruble mayelana 985.000. version iloli tippers kuwufanele ruble 888.000. By the way, ngokuvumelana umkhiqizi, Insephe "Okulandelayo" umgibeli has a ophahleni okusezingeni eliphezulu futhi kungenziwa ahlomele sezimoto emadolobheni inter-zesifunda.
Ekugcineni, intuthuko kwezobuchwepheshe wayeselibuyisela amaloli ethu. Ikakhulukazi kufanele kuphawulwe ukuthi imishini eyisisekelo Insephe imoto uchungechunge "Okulandelayo" (Passenger version yayo kanye) kuhlanganisa central locking, uphawu uhlelo audio, cruise control, isihlalo ukuphakama adjustable kanye nendawo, izibuko evuthayo esimenza abone into engemuva, amafasitela amandla, adjustable eziqondisa ikholomu, kanye inzwa ukuthi kuwuphawu sikhundla evulekile emnyango. inombolo elikhulu kangaka ongakhetha e kumila Gorky imoto ifektri umkhiqizo wawo "iNsephe" akekho umuntu kulindeleke.
Kungakhathaliseki ukucushwa futhi izindleko umshini, sewaranti ngayinye engu-3 noma 150,000 amakhilomitha.
Ukukhetha i-crane yokubeka ipayipi
Uyini izinga lokusebenza yenjini udizili?
KAMAZ-5308: ezibekiweko lobuchwepheshe, ukubuyekezwa
Zil-433362: imoto bonke izikhathi
PPC Ukuxilonga "iNsephe", ukulungisa ngezandla zabo, esikhundleni. Sifo CPT-53 GAS, GAS-31105, GAS-3110
Backhoe Loader Jcb 3CX Super: Ukucaciswa, imiyalelo yokusebenzisa
Indlela uzivikele imikhaza kanye nezifo ukuthi kuletha
Baked amazambane kanye ukuhluka kule isidlo
Ulwelwe Brown: incazelo emfushane uMnyango
I-Colombia umfula obaluleke kakhulu. Uphi i-Columbia (umfula)? Izici zokugeleza kwamanzi
Ingabe kufanele ngingene sithathe izimbali ngo amazambane, noma cha?
Echinacea tincture - izindlela eziphumelelayo amasosha omzimba okwandisa
Kungani amaJuda ubuzwe kunqunywa umama? Le nguqulo ethandwa kakhulu
Yekuchumana sendlela ukwenza umnsalo "Maynkraft"
Trikini sezimpahla zokubhukuda - ubuhle eyinkimbinkimbi lolwandle imfashini
Pie Batter - ephelele ukuhlangana nabangani
Kuyini umphakathi ukwaziswa futhi kuthinta kanjani ukuthuthukiswa ubuntu?